Tootle-अब हुनेछ रमाइलो मोटरसाईकल यात्रा र रमाइलो कमाइ (A NEW WAY TO GET/GIVE A RIDE IN KATHMANDU) - ADB Post
Home Local Tootle-अब हुनेछ रमाइलो मोटरसाईकल यात्रा र रमाइलो कमाइ (A NEW WAY TO GET/GIVE A RIDE IN KATHMANDU)
by Aadarsha Dhakal 10:58:00 PM
टूटलको दुई किसिमको Android App छ। ई app तपाईले Google Play Store बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ती App को नाम "Tootle" र "Tootle Partner" हो। यदि तपाई यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले "Tootle " डाउनलोड गर्न पर्छ। यदि तपाई कसैलाई यात्रामा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले "Tootle Partner " डाउनलोड गर्नुपर्छ।
के हो "Tootle"को काम ?
ल अब टूटल app खोल्नुहोस अनी आफ्नो जानकारी दियर अकाउंट बनाउनु। तेषपछि आफु भएको ठाउ र जाने ठाउ छन्नू अनि बुक गर्नु। तेषपछि तपाईलाइ कति लाग्छ पैसा देखाउँछ। अनि जाने समय छान्नु होस र पैसा तिर्ने तरीका छानेरा 'confirm ' गर्नुहोस। तपाईले भनेकै समयमा कुनै 'Tootle Partner ' आएर तपाईलाई मोटरसाईकलमा तपाइको गन्तब्य सम्म पुराईदिने छ।
कसरी कमाउने 'Tootle Partner' बाट ?
तपाईले टूटल पार्टनर भएर पैसा पनि कमाउने सक्नुहुन्छ। तेस्को लागि तपाईंले पहिला https://tootle.today/drive मा फारम भर्न पर्छ। तपाईंको खाता 24 घण्टा भित्र प्रमाणित भएपछि तपाईं सूचित गरिनेछ। तेषपछि 'Tootle Partner App' डाउनलोड गरेर Sign up गर्नुपर्छ। तपाईले Sign Up गरिसक्ये पछि Tootle App बाट यात्रा बुक गरेका मानिसहरुलाई यात्रा दिएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईलाई यो लेख राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक पनि गर्नुहोला। आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
Tootle-अब हुनेछ रमाइलो मोटरसाईकल यात्रा र रमाइलो कमाइ (A NEW WAY TO GET/GIVE A RIDE IN KATHMANDU) Reviewed by Aadarsha Dhakal on 10:58:00 PM Rating: 5